Namuhla ethandwa kakhudlwana emhlabeni wonke iba isidlo cuisine Japanese njengoba imiqulu. Yiqiniso, ungavele ukuthenga nganoma isiphi yokudlela, kodwa kukhona ishibhile futhi kungcono ukwenza ngokwakho ekhaya.
Ngemva ukulungiselela imiqulu ekhaya kuyinto esijabulisayo.
Manje ungathola lenqwaba zokupheka ukulungiselela imiqulu. Zenziwa kusuka ezihlukahlukene kwasolwandle nelayisi.
Mhlawumbe isici esibaluleke kunazo lapha irayisi nje. Ngakho ukunambitha izimfanelo imiqulu kuxhomeke ekutheni uyakusebenzisa ukukhetha eliphezulu irayisi, futhi kungaba kuphekwe kahle.
Futhi lapha kuphakama umbuzo: "Indlela ukupheka irayisi imiqulu efanele?" Yilokhu kuyoba athikili yethu.
Ngaphambi indlela ukupheka irayisi for imiqulu, kudingeka uthole ukuthi yini kuzothatha.
Ngakho, ukulungiselela abe semqoka kangaka udinga izithako ezilandelayo:
250 ml round irayisi;
50 ml irayisi noma yimuphi omunye izithelo uviniga;
1 isipuni ushukela granulated;
1 isipuni sikasawoti.
Ngaphambi kokuqhubeka ne nelayisi eliphekwe, kufanele kahle jabulile okungenani izikhathi ezintathu ukuze zinyamalale inzika enodaka. Khona-ke kufanele ukukulahla kwi-colander bese sokukhipha off bonke ketshezi. Ukuze ukupheka kakhulu, kudingeka alungiselele neemalirovannuyu pan (noma epanini) kokuba phansi obukhulu. Nje-ke futhi ungakwazi ukugeza elayisi imiqulu. Kodwa okubaluleke kakhulu, qiniseka ukuthi ayikho phakathi kwesokunxele amanzi.
Ngakho lapha, empeleni uqobo iresiphi irayisi imiqulu:
Kumele landiswa irayisi imiqulu nasethawuleni iphepha noma napkin ukuze ome futhi ngaphezu kwalokho-ke cishe ihora.
Ngemva ihora elilodwa uzodinga uthele epanini mayelana 1.5 amalitha amanzi, wafaka le wokudla irayisi, ngiyibeke phezu emlilweni ophansi phezu kwesitofu. Kulokhu, uqiniseke ukuthi uvala lid epanini.
Indlela ukupheka irayisi imiqulu? Njengoba isikhathi esifushane nje ekuqaleni ukubilisa epanini, udinga ukwehlisa ukushisa phezu kwesitofu ukuba kancane kakhulu futhi ukupheka irayisi mayelana imizuzu 13-15. Japanese zivame wanezela ngesikhatsi ukupheka kombu - omisiwe zasolwandle ensundu, onikeza irayisi imiqulu ngoba iphunga yasekuqaleni. Kodwa kunzima ngempela ukuthola ezitolo zethu, ukuze ukwazi ukwenza ngaphandle kwalo.
Khona-ke ukususa ipuleti kusukela epanini, ngaphandle kokuvula isivalo bese uyeke irayisi phisa cishe 10-15 imizuzu.
Futhi ngalesi sikhathi kunoma iyiphi isitsha, sihlanganise ushukela, ithebula usawoti kanye uviniga.
Khona-ke kudingeka uthele le marinade Thola Fig. Ungagxambukeli ke, vele uvule lokwela.
Ekupheleni uzodinga ukuvumela irayisi kuphole kancane, bese ungakwazi ukuqhubeka ngqo ukulungiswa imiqulu.
Nokho, lokho ngokuyisisekelo zonke.
Ukuze uthole imiphumela emihle, ungasebenzisa ekhethekile kagesi irayisi esishubile. Kodwa microwave ukupheka irayisi imiqulu sebekubeke engasebenzi. Well, okungenani, abadali emqulwini - Japanese abaningana abayamukeli.
Oh, futhi kufanele kuphawulwe ukuthi esikhundleni labapheki zethu Japanese nokulungisa avasezu marinade, okuyinto, isimiso, efana naye, ngesifo umehluko eyodwa kuphela - ngaphandle uviniga, ushukela nosawoti, engeza ukuba enye ilitha kwesigamu ngenxa.
Njengoba ubona, ukupheka irayisi for imiqulu kungaba ekhaya, balandela iseluleko indlela ukupheka irayisi for imiqulu. Ngeke nje kakhulu imali yakho. kodwa futhi uthole injabulo enkulu! Futhi ukuthi singabantwana ngamaphesenti ayikhulu isiqiniseko. Main kuphela ubhadala ihora, ukuthi umphumela wokugcina ilethe injabulo kakhulu. Rolls, kuphekwe izandla zabo abe ukunambitheka ekhethekile, ukunambitheka wobuciko zabo.
Sicabanga ukuthi manje wazi konke okudingayo mayelana nendlela ukupheka irayisi for imiqulu. Inhlanhla kuwe, umpheki bethu abathandekayo! Sifisa ukuba imiqulu akho Kwatholakala omkhulu, nasezihlotsheni zakho nabangane Babengeve bewusizo!
Njengoba ikiwi, ukuthi liyigugu futhi ukuthi Kusengenzeka ukuyenza?
Ukudoba Underwater ngoba eyikati: imithetho eziyishumi okuphumelela
Akti Beach Village Resort 4 * (Cyprus / ePhafu): kuzibuyekezo, izintengo nezithombe
Isiphuzo se-pea esiphundu kunazo zonke ngegobe
Ruberoid: izinhlobo nokusetshenziswa